Amaloota addaa dirree dhangi'amee
Dhaangessuu: Amala Dhangessuu qabduu ... cuqaasun qaaqaDhangessuu sarara Amaloota: Dirree Dhangi'e qindeessu dandeessa. Qaaqni Lakkoofsa Dhangii ni mul'ata.
Yoo dirreen dhangi'ame gara barruu dirree kuusaa deetaatti waliindhame, galfatni dirree kana keessaa akka barrutti yaalama. yoo dirreen dhangi'ame gara dirree kuusaa deetaa akka lakkoofsatti agarsiifame waliindhame, naqni akka lakkoofsotatti yaalama. Guyyaa fi yerolleen keessaan akka lakkoofsotatti qabamu.
Gatii durtii: Gatiin kun akka gatii durtiitti galmee haaraaf qindeessa.
Title is: Amaloota addaa dirree dhangi'amee